जापानमा सिम कार्ड बनाम पॉकेट वाइफाइ भाडा! कहाँ किन्ने र भाँडामा लिने? - Best of Japan
जापानी रातो फ्याक्स हिउँमा लडिरहेको = शटरस्टक
जापान मा यात्रा गर्नु भन्दा पहिले जान्नको लागि जानकारीको 11 आधारभूत टुक्राहरू >
जापान मा आफ्नो बसाई को समयमा, तपाईं एक स्मार्टफोन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? छ वटा सम्भावित छनौटहरू छन्। पहिले, तपाइँ तपाइँको वर्तमान योजना मा रोमि service सेवा को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर दरहरु को लागी तपाइँको सेवा प्रदायक संग जाँच गर्नुहोस्। दोस्रो, तपाईं जापान मा यात्रा गर्दा आफ्नो वर्तमान स्मार्टफोन को लागी नि: शुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को तपाईले सशुल्क Wi-Fi सेवाको सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। तपाईं एक प्रिपेड सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन जापानमा तपाईंको अनलक गरिएको स्मार्टफोनको साथ सेवा सक्षम छ। तपाईको देश वा जापानबाट भाडा सेवा प्रयोग गरी जेब वाइफाइ राउटर, सिम कार्ड वा सक्षम स्मार्टफोन पाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा, तपाईले आफ्नो होटेलबाट स्मार्ट फोन भाडामा लिन सक्षम हुनुहुनेछ। तल तपाईले निर्णय गर्न मद्दतको लागि यी विकल्पहरू मध्ये प्रत्येकको बारे जानकारी रहेको छ।
तपाईको प्रयोगको लागि उत्तम विकल्प के हो?
जापानमा नि: शुल्क Wi-Fi
भुक्तान गरिएको Wi-Fi
प्रीपेड सिम कार्डहरू
एक पकेट वाइफाइ राउटर भाँडामा लिनुहोस्
होटलको स्मार्ट भाडा सेवा प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँ कुन सेवाको साथ जानु पर्छ?
ओसाका जापानको कन्साइ एयरपोर्टमा सिम कार्ड भेन्डि machine मेशीन
तपाईंको यात्राको लागि उपकरण छनौट गर्नको लागि आवश्यक जानकारी निम्नानुसार छ।
लागत प्रभावी रोमि Services सेवाहरू
हालसालै, विदेशमा सस्तोमा प्रयोग गर्न सकिने रोमि services सेवाहरूको बृद्धि भइरहेको छ। यदि तपाइँको वर्तमान प्रदायक मार्फत सस्तो रोमि services सेवाहरू छन् भने यसलाई प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
पकेट वाइफाइ राउटरहरू
यदि तपाईं आफ्नो परिवार वा साथीहरूसँग यात्रा गर्नुहुन्छ भने, एक जेब वाइफाइ राउटर प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। एक वाइफाइ राउटरको साथ तपाईंको समूहले एक पटकमा एक भन्दा बढी स्मार्टफोनको साथ इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि तपाईंसँग दुई वा बढी वाइफाइ राउटरहरू छन् भने आपसमा सम्पर्कमा रहन यो तपाईंलाई सजिलो हुन्छ जब तपाईं समूहहरू र भ्रमण स्थलमा विभाजित हुनुहुन्छ।
थप रूपमा, यदि तपाइँ केवल तपाइँको स्मार्टफोन मात्र तपाइँको कम्प्युटर वा ट्याब्लेटको साथ इन्टरनेट ब्राउज गर्न चाहानुहुन्छ, वाइफाइ राउटर धेरै उपयोगी हुनेछ।
प्रि-पेड सिम कार्डहरू
यदि तपाईंको स्मार्टफोन अनलक छ र प्री-पेड सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्षम छ भने तपाईं यसलाई सामान्य रूपमा जापानमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्नुहोस् जब यो उपलब्ध हुन्छ
यदि तपाईंको छनौट रोमिंग सेवा वा प्रीपेड सिम कार्डसँग सीमितता वा क्षमता छ भने जब सम्भव भएमा लागत कम गर्न निःशुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्नुहोस्।
यस लेखमा, म तपाईंलाई सेवाका यी प्रकारहरूमा थप विवरण दिनेछु।
पहिले मलाई जापानमा नि: शुल्क वाइफाइको बारेमा वर्णन गरौं। जापानको नि: शुल्क Wi-Fi सेवा बिस्तारै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। तपाईं एयरपोर्टहरू, जापानमा स्टेशनहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, सुविधा स्टोरहरू, क्याफेहरू, होटेलहरू, इत्यादिमा नि: शुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा निम्न अनुप्रयोग स्थापना र दर्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईं स्वतन्त्र Wi-Fi लाई तुलनात्मक रूपमा सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जापान।
जापान कनेक्ट - मुक्त Wi-Fi
यो जापानको विदेशी पर्यटकहरूको लागि NTTBP कर्पोरेशनले प्रदान गरेको निवेदन हो। यसले 440० भन्दा बढी Wi-Fi स्पटहरूलाई समर्थन गर्दछ र यसले देशभर १ 150,000०,००० भन्दा बढी Wi-Fi स्थानहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि तपाई जापान कनेक्ट कनेक्टको लागि नि: शुल्क दर्ता गर्नुहुन्छ भने तपाई सजिलैसँग जडान गर्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक व्यक्तिगत वाइफाइ स्पटमा रेजिस्टर नगरी। सेवाले अधिकांश यातायात प्रणालीहरू र पर्यटक आकर्षणहरूको लागि Wi-Fi स्पटहरू समेट्छ। यसबाहेक, तपाईं शहरभर Wi-Fi मा जडान गर्न सक्नुहुनेछ किनभने प्रदायक NTTBP हो।
१. अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्
२. ईमेल ठेगाना वा SNS खाताको साथ दर्ता गर्नुहोस्
Select. वाई-फाई स्पटको दायरा भित्र वाई-फाई चयन गर्नुहोस्
Press. "जडान" बटन थिच्नुहोस्
Conn. जडान सम्पन्न भयो
तपाईंले तलको लिंक मार्फत जापान कनेक्ट कनेक्ट फ्री-फाई साइट पाउनुभयो।
>> "जापान कनेक्ट कनेक्ट फ्री Wi-Fi" को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
नि: शुल्क Wi-Fi स्थानहरू प्रयोग गर्दा सम्झनको लागि एउटा अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ईन्क्रिप्ट गरिएको छैन कि Wi-Fi को उपयोग गरेर इन्टरनेट ब्राउज गर्दा तपाईले व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जानकारी, इत्यादि प्रविष्ट गर्नबाट टाढा रहनु पर्छ।
यदि तपाईं सशुल्क Wi-Fi प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, म निम्न Wi-Fi सेवा सिफारिस गर्दछु। जापानमा प्रयोग गर्नको लागि एनटीटी डोकोमोबाट सेवा सबैभन्दा स्थिर हुनेछ। यद्यपि, प्रीपेड सिम कार्डहरू र पकेट वाइफाइ राउटरहरू जापानको धेरै भागहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कृपया तपाईको निर्णय लिँदा यि विचार गर्नुहोस्।
>> "आगन्तुकहरूको लागि डोकोमो वाइफाइ" को आधिकारिक साइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
>> "Wi2 300 सार्वजनिक Wi-Fi" को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
>> "सफ्टब्यांक वाई-फाई स्पॉट (पूर्व)" को आधिकारिक साइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
के तपाइँको स्मार्टफोनले जापानी सिम कार्डहरू समर्थन गर्दछ?
सिम कार्डहरू साना चिपहरू हुन् जुन मोबाइल फोनमा घुसाउन सकिन्छ जुन जानकारी भण्डारण गर्दछ र नेटवर्कमा जडान अनुमति दिन्छ।
यो नेटवर्कको लागि उपकरणको पहिचान गर्नका लागि द्रुत तरीका हो र तपाईंलाई लामो समय लिईकन सशुल्क सेवामा जडान गर्न अनुमति दिँदछ। त्यहाँ सिम कार्डहरू छन् जसले फोन कलहरू र सिम कार्डहरूलाई मात्र डेटा क्षमताहरू अनुमति दिन्छ।
कल गर्ने क्षमता भएको सिम कार्डले तपाईंलाई अस्थायी जापानी टेलिफोन नम्बर दिनेछ र तपाईंलाई सामान्य रूपमा फोन कल गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईसँग "डेटा मात्र" सिम कार्ड छ भने पनि तपाईले परम्परागत फोन लाइनको सट्टा बिभिन्न इन्टरनेट अनुप्रयोग प्रयोग गरेर फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ।
लगभग सबै प्रीपेड सिम कार्डहरू NTT डोकोमोको वायरलेस नेटवर्कमा छन्। डोकोमो भएकोका लागि परिचित छ
जापान भर सबै भन्दा शक्तिशाली नेटवर्क कभरेज।
प्रत्येक सिम कार्डको कभरेज क्षेत्रमा कुनै ठूलो भिन्नता छैन। निम्न सबै सिम कार्डहरूले जापानमा करीव १००% क्षेत्र कभरेज प्रदान गर्दछ।
प्रीपेड सिम कार्ड प्रयोग गर्नको लागि तपाईंसँग सिम अनलक भएको स्मार्टफोन हुनुपर्दछ। यसबाहेक, यो छ
स्मार्टफोनहरूलाई तलका बन्ड (ब्यान्ड) सँग उपयुक्त हुन आवश्यक छ। मुख्य
जापानमा प्रीपेड सिम निम्न बन्डसँग कार्य गर्दछ। यदि तपाईंको स्मार्टफोनले यी BAND समर्थन गर्दैन भने प्रिपेड सिम कार्डहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन।
LTE: ब्यान्ड १ (२१०० मेगाहर्ट्ज) / ब्यान्ड १ ((M०० मेगाहर्ट्ज) / ब्यान्ड २१ (१1०० मेगाहर्ट्ज)
G जी: ब्यान्ड १ (२१०० मेगाहर्ट्ज) / ब्यान्ड //१ ((M०० मेगाहर्ट्ज)
केवल निश्चित हुनको लागि, म सिफारिस गर्दछु कि तलको वेबसाईट प्रयोग गरी तपाईको स्मार्टफोनले सिमकार्ड किन्नु अघि तपाईले यसलाई किन्नु भन्दा पहिले।
>> "मेरो फोनले काम गर्नेछ" को आधिकारिक साइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं कुन जापानी प्रीपेड सिम कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ?
अर्को, म सिफारिश गरीएको प्रीपेड सिम कार्डहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा परिचय दिनुहोस्।
म पहिले यो कुरा भन्न चाहन्छु कि जापान भ्रमण गर्ने विदेशीहरूका लागि प्रीपेड सिम कार्डको मूल्य एयरपोर्ट र शहरहरू बीच भिन्न हुनेछ। किनकि कार्डहरू प्राय जसो एयरपोर्टहरूमा खरिद गरिन्छ कृपया यी स्थानहरू मध्ये कुनै एकमा सिम कार्डको लागि ओभरपे नल गर्न सावधान रहनुहोस्।
नरीता, हनेडा र Chuu Centrair (नागोया) अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा तपाईले "एयर बीआईसी क्यामेरा" (तलको लिंक) फेला पार्न सक्नुहुन्छ। म यस स्थानलाई सिफारिस गर्दछु किनकि सिम कार्डहरू यहाँ एयरपोर्टमा समान मूल्यमा बेचिन्छ तपाई शहरमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
>> "एयर बिक क्यामेरा" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तल सिफारिश गरिएको प्रीपेड सिम कार्डहरू छन्।
जापान स्वागत सिम
एनटीटी डोकोमोले भर्खर जापानका आगन्तुकहरूको लागि यो प्रीपेड सिम सेवा सुरू गर्‍यो। जापान आउनु भन्दा पहिले तपाईले वेबसाइटमा प्रक्रिया पूर्ण गर्नु पर्छ। जब तपाईं जापानमा पुग्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो सिम कार्ड एयरपोर्ट काउन्टरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिम कार्डलाई जापानमा आउनु अघि तयारीको आवश्यक पर्दछ तर तपाईं यसलाई सजिलैसँग एयरपोर्टमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन शहरमा बेचिन्छ। विवरणको लागि, कृपया तलको लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
१ days दिन असीमित प्रयोग (१२15 केबीपीएस)।
उच्च गति डाटा संचार (अधिकतम गति = 788 XNUMX एमबीपीएस) चार्ज गरेर सम्भव छ।
c। ¥ १०० (उच्च गति डाटा चार्ज = कुनै पनि होइन)
सी। ¥ १1,836 (उच्च गति डाटा चार्ज = M०० एमबी + लाभ १०० एमबी)
सी। ¥ २,2,376 (उच्च गति डेटा चार्ज = १ जीबी + लाभ २०० एमबी)।
⇒ तपाईं वेबसाईटबाट थप उच्च-गति डाटा खरीद गर्न पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ (१००MB =
सी। ¥ २१216 / M०० एमबी = सी। ¥ 500¥756 / १ जीबी = सी। ¥ १, २ 1))।
⇒ तपाईं भिडियोहरू हेरेर, प्रश्नावलीहरूको उत्तर दिएर, अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गरेर र लेखहरू पढेर उच्च-स्पीड इन्टरनेट डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
Free "नि: शुल्क योजना" पनि सुरु भयो। यो सीमित समय योजना हो जुन तपाईंलाई जापानभर उच्च-गति संचारको लागि नि: शुल्क सिम कार्ड प्रदान गर्दछ। यद्यपि यस योजनाको सिम कार्ड केवल सीमित स्थानहरूमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। कृपया तलको लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> "जापान स्वागत सिम र Wi-Fi" को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
b- मोबाइल VISITOR सिम
यो प्रीपेड सिम कार्डले डोकोमोको नेटवर्क लाइन प्रयोग गर्दछ। जापानमा पुगे पछि, तपाईं अमेजन र एयरपोर्ट बाहेक अन्य अनलाइन खुद्रा विक्रेताहरूबाट कार्डहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। नेटवर्क स्थिर भएदेखि, यदि तपाईं यी सिमकार्डहरूको उपलब्धता अवधि र क्षमताले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईंले यो विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ। विवरणको लागि, कृपया तलको लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापान संचार इंक।
२१ दिन (डाटा रकम = GB जीबी, अतिरिक्त १ जीबी चार्ज)
c। ¥ 3,223
⇒ तपाईं शुल्क पृष्ठबाट १ जीबी / १ दिन (सी। ¥००) चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया तलको लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> "b-मोबाइल VISITOR सिम" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईं प्रिपेड सिम कार्ड प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं कुनै डाटा सीमा बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईं यो जापान एयरलाइन्स सम्बद्ध कम्पनीबाट एउटा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यस कम्पनीले डाटाको सीमित मात्रा, पकेट वाइफाइ राउटरहरू र भाडा मोबाइल फोनहरूको साथ प्रीपेड सिम कार्डहरू पनि बिक्री गर्दछ।
उपयोगी अवधि र मूल्य
Day दिन (c। ¥,०००) / १ Day दिन (c।, ,,7००)
⇒ यस कम्पनीले "उनारी-कुन सिम" नामको प्रिपेड सिम कार्ड बिक्री गर्दछ, जुन केवल नरिता एयरपोर्टमा फेला पार्न सकिन्छ। "उनारी-कुन" नरिताको चरित्र हो। यो चरित्र प्याकेजमा कोरिएको छ तर सिम कार्ड "असीमित जापान प्रिपेड सिम" जस्ता छ। "० दिन (c ¥ ,,30००) को लागि यो "Unari-कुन सिम" प्रयोग गरेर योजना पनि छ। यदि तपाइँ एक महिनाको लागि रहिरहनु भएको छ भने म यो day० दिने योजनाको सिफारिश गर्दछु।
>> "असीमित जापान प्रिपेड सिम" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यात्रा को लागी प्रीपेड सिम
सफ्टब्यांक, जसले यो प्रीपेड सिम कार्ड प्रदान गर्दछ, अद्वितीय वाइफाइ नेटवर्क को वाहक (MNO) को रूपमा डोकोमो जस्तै प्रयोग गर्दछ, त्यसैले जडान स्थिर छ। किनभने सफ्टब्यांक प्रायः अभियानहरू सञ्चालन गर्दछ, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईले ठूलो सौदा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाई3जीबी सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
मूल्य डीलर द्वारा फरक हुन्छ। एयरपोर्ट पसलहरू सामान्यतया महँगो हुन्छन्। यदि तपाईं एयरपोर्टमा खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, माथि उल्लेख गरिए अनुसार, BIC क्यामेरा सस्तो र सिफारिस गरिएको छ।
>> "यात्रा को लागी प्रिपेड सिम" को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
वाई-हो! प्रीपेड सिम डाटा र आवाज
जापानको प्राय: प्रीपेड सिम कार्ड डाटा संचारको लागि समर्पित छ र भ्वाइस कल गर्न सक्दैन। यसैबीच, यस दुर्लभ सिम कार्ड, "वाई - हो! प्रिपेड सिम डेटा र आवाज" टेलीकॉम स्क्वायर, इंक द्वारा बेचिएको भ्वाइस कललाई समर्थन गर्दछ। यो सिम कार्डले डोकोमो नेटवर्क प्रयोग गर्दैन तर एक सस्तो विकल्प वाई-मोबाइल प्रयोग गर्दछ। यस कारणका लागि, नेटवर्क स्थिरता केही हदसम्म निकृष्ट छ। यदि तपाईंसँग भ्वाइस कल गर्ने तीव्र इच्छा छ भने यस सिम कार्डलाई विचार गर्नुपर्छ। यदि तपाईं यो सहरमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भने तपाईं कुनै पनि समस्याहरूको अनुभव गर्न सक्नुहुन्न।
टेलिकम स्क्वायर, Inc.
१ जीबी = सी। ¥ ,,1०० सम्म योजना
Addition यसका अतिरिक्त टेलिकम स्क्वायरले डाटाको उपयोगको लागि प्रिपेड सिम कार्डहरू केवल डोकोमोको नेटवर्क मार्फत बिक्री गर्दछ।
>> "वाई-हो! प्रिपेड सिम डेटा र आवाज" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही यो भवनहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न सकिँदैन
वाइफाइ राउटर परिवार र साथीहरु संग साझा गर्न सकिन्छ। स्मार्टफोनको साथसाथै, यो पीसी वा ट्याब्लेट प्रयोग गर्नका लागि सुविधाजनक तरिका हो। सायद जापानमा आउनु भन्दा पहिले तपाईंको देशमा राउटर उधार लिन सम्भव छ। त्यो अवस्थामा, विचार गर्नुहोस् कि तपाइँको देश मा orrowण लिन वा जापान मा orrowण लिन।
जापानमा, जापान भ्रमण गर्ने विदेशीहरूको लागि वाइफाइ राउटरहरू भाडामा लिने सेवाहरू थोरै बृद्धि भइरहेका छन्।
कृपया तलको बाह्य लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
सबैभन्दा पहिले, तपाईं जापान आउनु अघि तपाईंले वेबसाइटमा आवेदन गर्नु पर्छ। जब तपाईं जापानमा पुग्नुहुन्छ तपाईं एयरपोर्ट काउन्टरमा वाइफाइ राउटर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग पनि सेवा प्रदायकले राउटरलाई तपाईंको निवासमा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं आफ्नो देशमा फर्कनुहुन्छ तपाईं सजिलैसँग यसलाई एयरपोर्ट काउन्टरमा फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं घर डेलिभरी प्रयोग गरेर पनि राउटरहरू फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
यो धेरै सुविधाजनक छ यदि तपाईंसँग वाइफाइ राउटर छ। यद्यपि वाइफाइ राउटरहरू कहिँ पनि प्रयोग गर्न सकिदैन। दुर्भाग्यवस, जापानमा, वाइफाइ राउटरहरू अक्सर भवनहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अनुपयुक्त हुन्छन्। यदि तपाईं कुनै पनि समयमा र जहाँसुकै इन्टरनेट जडान चाहनुहुन्छ भने यो प्रीपेड सिम कार्ड वा भाडामा रहेको मोबाइल फोन वाइफाइ राउटरमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। तलको वेबसाइटमा, तपाई भाडामा उपलब्ध मोबाइल फोनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
सिफारिस गरिएको भाडा सेवा
म निम्न तीन भाडा सेवाहरू सिफारिस गर्दछु।
निन्जा वाइफाइ ग्लोबल वाईफाई द्वारा संचालित
टोक्योमा आधारित भाडा सेवा प्रदायक भिजन इंकले जापानमा आएका विदेशी आगन्तुकहरूको लागि "NINJA WiFi" नामको भाँडा सेवा सुरू गरिसकेको छ। यो कम्पनीले मुख्यतया जापानी यात्रीहरूको लागि "ग्लोबल वाइफाइ" नामको भाडा सेवा सम्हाल्छ। यस कम्पनीका प्रमुख एयरपोर्टहरूमा काउन्टरहरू भएकोले, तपाईं एयरपोर्टमा वाइफाइ राउटरहरू, मोबाइल फोन र सिम कार्डहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यो कम्पनीले मोबाइल स्वत: अनुवादकहरु पनि भाँडामा लिन्छ। मैले तिनीहरूलाई धेरै पटक सापट लिएको छु। यदि तपाईं स्वचालित अनुवादकमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया यो कम्पनीको साइट जाँच गर्नुहोस्। त्यहाँ दुई प्रकारका स्वचालित अनुवादकहरू छन्। तिनीहरू "Ili" र "POCKETALK" हुन्। मैले "Ili" सँग धेरै अप्रिय ध्वनी रहेको पाए, त्यसैले म "POCKETALK" अधिक प्रयोग गर्दछु।
>> "निन्जा वाईफाई" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जाल एबीसी, इंक, जापान एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी, भाडाको वाइफाइ राउटरहरू र मोबाइल फोनहरू साथै प्रीपेड सिम कार्डहरू ह्यान्डल गर्दछ। त्यहाँ प्रमुख एयरपोर्टहरूमा काउन्टरहरू छन् त्यसैले तपाईं ती काउन्टरहरूमा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
>> "JAL ABC" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यो भाडा सेवा टोकियोमा मुख्यालय टेलिकम स्क्वायर, इंक द्वारा चलाइएको छ, प्रमुख एयरपोर्टहरूमा काउन्टरहरूको साथ। तपाईं यहाँ पकेट वाइफाइ - राउटर र स्मार्टफोनहरू लिन सक्नुहुनेछ।
>> "टेलिकम स्क्वायर" को आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
सफ्टब्यांक ग्लोबल भाडा
यो भाडा सेवा हो सफ्टब्यांक, NTT डोकोमोको साथ एक जापानी दूरसञ्चार वाहक द्वारा संचालित। तपाईं Wi-Fi राउटर र स्मार्टफोन यहाँ पनि लिन सक्नुहुनेछ। विवरणका लागि तल बाह्य लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> "सफ्टब्यांक ग्लोबल भाडा" को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जापानमा त्यहाँ धेरै अन्य Wi-Fi राउटर भाडा सेवाहरू छन्। तिनीहरू मध्ये केही NTT डोकोमोको Wi-Fi राउटर ह्यान्डल गर्छन्। दुर्भाग्यवस, अनुप्रयोगहरू केवल जापानीमा मात्र बनाउन सकिन्छ। मलाई आशा छ कि जापान भ्रमण गर्ने विदेशीहरूको लागि यी भाडा सेवाहरूले छिट्टै सुधार गर्नेछन्।
हालसालै, जापानमा पनि होटेलहरू जुन पाहुनाहरूलाई स्मार्टफोन भाडामा लिन्छन् अलि अलि बढ्दैछन्। निम्न होटलहरूले ठूलो मात्रामा फोनहरू भाडामा लिन सुरु गर्ने तालिका बनाइएको छ। यदि तपाईं यी मध्ये कुनै एउटामा बस्न चाहनुहुन्छ भने, स्मार्टफोन भाडामा बढि जानकारीको लागि होटललाई किन सम्पर्क नगर्ने?
मुख्य होटेलहरू स्मार्टफोन भाडा सेवा सुरु गर्न तालिकामा छन्
होटल मोन्टेरे समूह
होटल प्रत्यक्ष मैक्स
ओकिनावा मैरियट रिसोर्ट र स्पा
कावागो प्रिन्स होटेल
क्योटो सेन्चुरी होटल
केियो प्लाजा होटल
केियो प्लाजा होटल सप्पोरो
क्यापिटल होटल टोक्यू
सनशाइन सिटी प्रिन्स होटल
Shinjuku प्रिंस होटल
शिन योकोहामा प्रिन्स होटल
स्विसोटेल ननकाई ओसाका
Cerulean टॉवर टोक्यू होटल
नाम्बा ओरिएंटल होटल
हेन्न ना होटल लागुना टेन बॉस
होटल चिन्जान-सो टोकियो
हलिडे इन ओसाका नाम्बा
योकोहामा बे होटल टोक्यू
रोयल पार्क होटल
माफ गर्नुहोला यती धेरै जानकारीहरु समाबेश गर्न को लागी मलाई आशा छ कि यो तपाईको केही कामको हो यो लेख पढिसकेपछि कुन सेवाले तपाईंको आवश्यकतालाई सबैभन्दा राम्रो गर्दछ? याद गर्नुहोस् कि कति जना मानिससँग तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं कहाँ जानुहुन्छ र तपाईंले प्रयोग गर्न चाहानु भएको उपकरणहरू।
यदि म जापान मा यात्रा गर्दै थिएँ भने म निम्न रणनीति प्रयोग गरेर तयार गर्न सक्छु।
- पहिलै परिचय गरिएको अनुप्रयोग "जापान जडित - नि: शुल्क वाइफाइ" प्रयोग गर्नुहोस्। होटलमा बिताएको समय सहित उपलब्ध हुँदा म नि: शुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्ने छु।
- नि: शुल्क वाइफाइ नेटवर्कहरू उपलब्ध नभएका क्षेत्रहरूमा म एनटीटी डोकोमोद्वारा प्रदान गरिएको “जापान वेलकम सिम” प्रयोग गर्नेछु। यो सिम कार्ड अधिक डाटाको साथ चार्ज गर्न सकिन्छ जब आवश्यक हुन्छ।
तपाई कुन रणनीति बनाउनुहुन्छ? जे भए पनि, म आशा गर्दछु तपाईको यात्रा अद्भुत छ!
"आधारभूतहरू" मा फर्कनुहोस्